Myanmar Youth Media Club - Global News
Russain President Putin And Wife Say Marriage Is Over ! Reuters က Russia သမ္မတ Vladimir Putin နဲ့သူ့ရဲ့ ဇနီး သမ္မတ ကတော် Lyudmila Putina တို့ကွာရှင်း လိုက်ပြီလို့သ တင်းထုတ်ထား ပါတယ်။
130	Continue Reading
Children Cancer Wing Transformed into Super Hero Ward Brazil နိုင်ငံက ကင်ဆာရောဂါ စင်တာ တစ်ခုက Justice League ထဲက Superheros တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကလေးတွေ ရဲ့ ကင်ဆာ ရောဂါကို လျော့ပါး သက်သာအောင် ကုသ ပေးနေပါတယ်။
104	Continue Reading
Cockroaches Are Evolving! ပိုးဟပ်တွေက သူတို့ကို သေစေမယ့် အဆိပ် တွေကိုတောင် ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ အထိ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာပြီး မကြာခင် လူသား တွေကိုရော အောင်နိုင်တော့ မှာလားဆိုတာ တွေးစရာ ဖြစ်လာပါပြီ။
342	Continue Reading
Apple 1 Breaks Auction Records Steve Wozniak ရဲ့လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက် ထားတဲ့ Apple 1 ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို လေလံတင် ရောင်းချခဲ့ ရာမှာ ဒေါ်လာ ၆၇၁၄၀၀ နဲ့လေလံ စံချိန်သစ် တင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
138	Continue Reading
Hotel in Dubai Introduces Gold iPad for Guests ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ခုတည်းသော ကြယ်၇ပွင့် ဟိုတယ် Burj Al Arab မှာလာတည်းတဲ့ ဧည့်သည်တွေ အတွက် ၂၄ carat ရွှေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ iPad တွေကို ဟိုတယ်က မိတ်ဆက် ပေးလိုက် ပါပြီ။
603	Continue Reading
David Beckham Will Retire from Playing Soccer ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးသမား David Beckham ပာာဒီရာသီကုန်မှာ သူ့ရဲ့နှစ်၂၀ ကြာထွန်းလင်း တောက်ပ ခဲ့တဲ့ ဘောလုံး သမား ဘဝကနေ အနားယူ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
194	Continue Reading
People Should Eat Insects to Fight Hunger အင်းဆက် ပိုးကောင်တွေကို စားသုံးခြင်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အစာရေစာ ရှားပါးမှုနဲ့ အစာကြောင့်ထွက် လာတဲ့ ညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ချနိုင်တယ်လို့ UN ကဆိုပါတယ်။ 192	Continue Reading
Omar Deported for Being Too Handsome UAE ကသရုပ်ဆောင် ဖြစ်တဲ့ Omar Borkan Al Gala က Saudi Arabia ကအမျိုးသမီးတွေ အတွက် ချောမော လွန်းနေ တာကြောင့် နိုင်ငံတွင်းက မောင်းထုတ် ခံခဲ့ရ ပါတယ်တဲ့။
1139	Continue Reading
2345 > >> Categories	Movies & Celebrities
Facebook Top 10 Ways to Find Better Answers Online Author amedeo	သင်တို့လိုချင်သမျှ ရှာဖွေချင်သမျှ အားလုံးကို Google လိုက်လို့ရပေ မယ့် အကောင်းဆုံးနဲ့ အတိကျဆုံး ဖြစ်မယ့် အဖြေကိုတော့ အမြဲတမ်း ရှာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ Online မှာ လိုချင်တဲ့အဖြေကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးရှာဖွေဖို့နည်းလမ်း ၁၀ ခုကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်ရအောင်နော်။	Read more
Why People Love Beats by Dre Headphones Author Administrator	Beats by Dre ဆိုတာက Headphone တွေကြားမှာနာမည်ရပြီးသား တံဆိပ်တစ်ခုဆိုတာ သေချာပါတယ်။ အထူး သဖြင့်လူငယ်တွေကြားမှာ Dre Headphone တွေတက်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတာကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ Read more
Instagram Update New Filter for iPhone Author papaya	Instagram ကသူရဲ့ iPhone Update နဲ့အတူ အသုံးပြုသူတွေကို တောင်းပန်လွှာ တစ်ခုကိုပါ ထုတ်လိုက် ပါပြီ။ ဘာတွေ ပါမလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြ ရအောင်ပါ။	Read more
Instagram Update New Filter for iPhone Stick N' Find Author Administrator	ကားသော့၊ အိမ်သော့လို အရွယ်အစား သေးငယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက ပျောက်ရင် ရှာရခက်ပါတယ်။ အခု အသစ်ထွင်လိုက် တဲ့ StickNFind ကသင်ပျောက်နေတဲ့ အရာကို ၀ိုင်းကူရှာ ပေးမှာပါ။ Read more
Stick N' Find
Content View Hits : 8591540